बेगनासले बाँचेका मानिसहरु – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
५ कार्तिक २०७७, बुधबार ०१:३८ English
बेगनासले बाँचेका मानिसहरु
निरोज कुमार थापा, पोखरा, ६ साउन । चारैतिर उच्च पहाडले घेरेको बिशाल दह, बेगनास ताल । बेगनास ताल कास्की जिल्लाको लेखनाथ पोखरा महानगरपालिकामा पर्दछ । यो ताल नेपालको सबैभन्दा ठूलो ताल मानिन्छ । यस तालको क्षेत्रफल ३.७३ वर्ग कि. मि. अर्थात् ३७३ हेक्टर रहेको छ । यस तालले लेखनाथ नगरपालिकाको कुल क्षेत्रफलको ४.७५ प्रतिशत भुभाग ओगटेको छ ।
७.५ देखि १०.६ मिटर गहिराइ भएको यस तालमा बि.स. २०४४ सालमा बाँध बाँधिएको थियो । बाँध बाधेपछि २२० हेक्टरबाट बढेर तालको क्षेत्रफल ३७३ हेक्टर पुग्यो । यहि बाँधबाट निकालिएको नहरले नगरपालिकाको खुदी फाँट र मालमूल फाँटमा सिंचाइ सुबिधा हुँदै आएको छ ।
पोखराको मुख्य बजार क्षेत्रमै रहेको फेवा तालपछि पर्यटकहरुको घुँइचो लाग्ने ठाउँ हो, बेगनास ताल । यस तालको सौन्दर्यतामा झुम्न स्वदेशी तथा बिदेशी पर्यटकहरुको लाम लाग्ने गरेको दृश्य देख्न सकिन्छ ।
पोखराबाट १५ किलोमीटर दुरीमा पर्ने यो तालमा २०० भन्दा बढी डुङ्गाहरु छन् । डुंगामा सयर गरेर पर्यटकहरुले तालको सौन्दर्यतालाई निकटबाट अवलोकन गर्ने गर्दछन् । विशेष गरी जाडो मौसममा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकले यो क्षेत्र भरिभराउ हुन्छ ।
ताल नजिकका गाउँका बासिन्दाहरु तालमा डुंगा चलाएर आफ्नौ दैनिकी गुजारिरहेका छन् । जीवनयापनका लागि पनि तालले उनीहरुलाई ठूलो सहयोग गरेको छ ।
धेरै वर्ष पहिले उक्त तालमा महिलाले मात्र डुङ्गा चलाउने गर्थे रे । एक किसिमले भन्ने हो भने, महिलाले मात्रै डुंगा चलाउने परम्परा नै थियो पनि भन्ने गरिन्छ । तर उक्त तालमा २० बर्ष डुङ्गा चलाएका रणबहादुर गुरुङ यो कुरा मान्न तयार देखिएनन् । उनले पुरुषहरु कमाउन बिदेश जाने, घर छोडेर शहर जाने भएकाले बाध्यताले महिलाले डुंगा चलाउनु परेको उनको तर्क छ ।
अहिले तालमा चल्ने डुंगा आवश्यक भन्दा बढी छन् । जति धेरै डुंगा भएपनि ताल संरक्षण समितिले सबैले बराबरी गरिखान पाउन भनेर आलोपालो प्रणाली गरेको रहेछ । एउटा डुंगामा ४ देखि ५ जना अट्छन् । यसरी ५ जनासम्म राखेर एक घन्टा तालमा घुमाए वापत डुंगा चालकले ५०० पाउँछन् । हरेक डुंगाबाट समितिलाई मासिक १५० बुझाउनु पर्छ ।
तालमा विभिन्न २३ प्रकारको माछा पाइने अनुमान गरिएको छ । तालको किनारमा हरेक वर्ष माछा महोत्सव पनि आयोजना गरिन्छ । यसले पनि बेगनास ताल माछाको दृश्याबलोकनका लागि समेत उत्कृष्ठ गन्तव्य हो भन्ने कुराको पुष्टि गर्दछ ।
तालको दक्षिण कुनामा बराह मन्दिर छ । ताल घुम्न भन्दा मन्दिर दर्शनमा बढी भक्तजन पुग्छन् । मन्दिर परिसरका ठुला ढुङ्गाहरुमा विभिन्न प्रकारका शिलालेख कोरिएका छन् । अहिले बराह मन्दिरको संरक्षणको प्रयास भईरहेको छ । विभिन्न संघसंस्था र चन्दा दाताबाट २ करोड ५० लाख रकम पनि उठिसकेको छ ।
अन्त्यमाः बेगनास ताल केवल कास्कीको मात्र नभई समग्र देशकै सुन्दर पर्यटकीय गन्तव्य हो । यसको उचित्त व्यवस्थापन र प्रयोग गरेर पर्यटकीय गतिविधि बढाउन सकिन्छ । यसको लागि सम्बन्धित सरोकारवाला सबैको ध्यान जान आवश्यक छ ।
६ श्रावण २०७६, सोमबार १३:१४ मा प्रकाशित